मेरा सेनापतिहरु नै अरुसँग बिकेपछि मेरो सरकार ढल्योः केपी ओली – Points Nepal
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २३, २०७८ समय: ११:२९:०५
शुक्रबार स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूको भेलामा ओलीले आफ्नो हालत बंगाली नवावको जस्तो भएको भनी चर्चा गरेका हुन् । बंगाल राज्य बचाउनुपर्नेमा अंग्रेज सरकारसँग नै सेनापति मिलेकाले बचाउन नसकिएको जस्तै अहिले आफ्नो हालत पनि त्यस्तै भएको बताए ।
अंग्रेज सरकारले बंगाललाई नियन्त्रणमा लिँदा त्यहाँको सेनापति मिर जाफरलाई जसरी किनेर प्रयोग गरेको थियो, त्यसरी नै आफ्नो पार्टीका नेताहरूले बिकेकाले आफ्नो सरकार ढलेको उनको भनाइ थियो ।
आफ्नो सरकारलाई देश–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले ढालेको उनले दाबी गरे ।
‘अलिकति राजनीति इमान र जमान गुमाएपछि जहिल्यै पनि सत्तामा बस्न पाइने रहेछ । जस्तै, प्रचण्डहरू हिजो म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारमै थिए, अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारमा छन्,’ ओलीले भने ।
ओलीले आफ्नो पार्टीले नेपाल बनाउने दाबी पनि गरे । ‘नेकपा एमालेको नीति सही छन्, एमालेले नै देश बनाउँछ भन्नेमा तपाईहरू विश्वस्त हुनु भएको छ, यो राम्रो हो,’ उनले भने ।
यसअघि फरक प्रसंगमा ओलीले नेपाल देश जीवनमय भएकोले नयाँ बिरुवा लगाउनु नपर्ने र भएको नमास्दा मात्रै पुग्ने पनि बताए ।
‘हाम्रो देश जीवनमय देश छ । पहिले गंड्यौला, बाँदर, बाघभालु, हात्तिगैंडाको खेती पहिले कसले गर्थ्यो रु सालघारी, सिसौ, खयर कसले लगाएका हुन् रु यार्चागुम्बा कसले उमारेका हुन् ? आफैं उम्रिन्छ ।
निमा रुख कसले उमारे ? सबै आफैं उम्रिन्छ । झारपात आफैं उम्रिन्छ । फलफूल आफैं उम्रिन्छ’ ओलीले भने, ‘आरा बन्चरो लिएर जंगल नपस्ने हो भने दस वर्षमा देश जंगलमय भइसक्छ । बिरुवा उमार्नका लागि केही गर्नु नै पर्दैन । खाली नमासे पुग्छ ।’
Last Updated on: January 7th, 2022 at 11:51 am